Google ga-ebido ngwa ohuru: Android Auto for mobile screens | Gam akporosis
Ọ na-eju anyị anya na ọhụrụ "Android Auto maka mobile meziri" ngwa, ma na-abịa site na Google n'ezie na ha nwere ezigbo ihe ngọpụ iji malite ngwa ọzọ.
Ọbụna ịmara na gam akporo Auto nwere ike ịbanye na Google Assistant na enweghị mkpa ịwụnye ngwa ahụ, na ibe nkwado, Google na-akọwa na A na-emezi akpaaka ugbu a na gam akporo 10 na ịchọghị ngwa. Naanị ijikọ ngwaọrụ gị na ụgbọ ala kwesịrị ịrụ ọrụ.
Mana ihe dị mkpa na-abịa ozugbo ederede ahụ, kemgbe Google na-adụ ọdụ na izu ole na ole sochirinụ ga-ebipụta ngwa ọhụrụ akpọrọ "Android Auto for mobile screens" na Storelọ Ahịa Play.
Ozugbo ọ kwuchara na enwere ike ibudata ya a ngwa-anọgide na-eji ihuenyo version nke gam akporo Auto mobile. Yabụ hapụrụ anyị ọtụtụ obi abụọ nke ụfọdụ echiche nwere ike ịpụta ìhè.
Ebe ọ bụ na ọ bụ naanị a Mee ka ọnọdụ ịkwọ ụgbọala nnyemaaka gị na-abịanụ, dị ka Google Pọdkastị bụ kpọmkwem ịnweta ngwa Google, ma ọ bụ ọbụna ụdị nke Auto na otu interface ekwentị, ọ bụ ezie na ejedebeghị na ekwentị ndị okenye.
Na nkwupụta nke yiri ka ọ dị irè karị, nke ahụ ngwa bu nke ohuru na ọ nwere ike na-enye otu redesigned interface maka gam akporo Auto maka ụgbọala ndị wepụtara n'oge na-adịbeghị anya. Ewezuga na ihe niile ga-arụ ọrụ na ekwentị mkpanaaka gị.
Eziokwu anyị tụbara na-efu efu na gam akporo Auto maka mobile interface ọhụrụ ahụ nke ihe niile dị mma ma na-enye ahụmahụ ka mma. Ya mere, a na-amalite ịkụ nzọ ahụ ka ọ bụrụ na izu ole na ole Google ga-ewepụ anyị obi abụọ site na iji ngwa ọhụrụ anyị ga-ebudata na Storelọ Ahịa Play.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google ga - amalite ngwa ohuru "Android Auto for mobile screen"